သင်ဆီ ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနိုင်မဲ့ လက္ခ္ခဏာများ
သင်ဆီ ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ ကြိုသိနိုင်မဲ့ လက္ခ္ခဏာများ မကြာခင်မှာ ကံကောင်းခြင်းတွေ သင့်ဆီကို ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသိနိုင်လဲ..? ကံကောင်းခြင်းတွေကို ကိုယ့်ဆီကို ရောက်လာတော့မယ် ဆိုတာကို ရှေ့ပြေးနိမိတ် သင်္ကေတတွေက တစ်ဆင့် သိနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာေ တာ့ ကံကောင်းခြင်းရဲ့ နိမိတ်ကင်္ကေတတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ […]
သင့်အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ ဝိဉာဉ်ရောက်နေမှန်း သိနိုင်မယ့် လက္ခဏာ (၃) မျိုး ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်တဲ့လောကကြီးဟာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလောကကြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဟာ ဒီလောကကြီးမှာပဲ ကျင်လည်ကြတဲ့အတွက် တခြား ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လောကလည်း ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်မခံချင်လို့တော့မရပါဘူး။ ဝိညာဉ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာ အတိအကျတောမသိပေမယ့် သင့်အနားကိုသူတို့ရောက်နေမှန်းတော့ သိလို့ရပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်အနားမှာ တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့ […]
မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေ ရဲ့ ဝိုင်းရံ​နေခြင်းကိုခံနေရရှာတဲ့ ၁၈ နှစ်​အရွယ်က​လေးအ​မေ ညည နှစ်​​ထောင်​​ပေးမယ်​ ငါး​ထောင်​​ပေးမယ်​တဲ့- က​လေးအ​မေ ၁၈ နှစ်​အရွယ် ​လေးခဗျာ မကူညီဘဲ ​ခြေ​တော်​တင်​ဖို့ ကြိုးစားကြသူ​တွေ ရဲ့ ဝိုင်းရံ​နေခြင်းကိုခံရတယ် …. ။ ညည နှစ်​​ထောင်​ ငါး​ထောင်​ ကိုပဲထိုင်​ယူ​နေရင်​​တောင်​ […]
မိတ်ကပ်မကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားသာချက်များ
မိတ်ကပ်မကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှာသာ ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အားသာချက်များ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ အရမ်းကြိုက်ပြီး မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေ ၀ယ်ရတာကြိုက်တဲ့သူတွေရှိသလို မိတ်ကပ်လိမ်းရတာ လုံးဝမကြိုက်၊ မိတ်ကပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ foundation, two way လောက်တောင် နပ်မှန်အောင် မ၀ယ်ဖူးတဲ့သူတွေလည်း ရှိမှာပါ။ မိတ်ကပ်လိမ်းရတာမကြိုက်တဲ့ သူလေးတွေအနေနဲ့ တခြားသူတွေထက် ပိုသာနေတဲ့အချက်လေးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ မိတ်ကပ်မကြိုက်တဲ့ ပျိုမေတို့ မှန်ရဲ့လားဆိုတာ […]
အခက်အခဲ ကြုံနေရလျှင် မျော်​လင့်​မထား​သော အကျိုးထူးများရရှိ ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်း
အခက်အခဲ ကြုံနေရလျှင် မျော်​လင့်​မထား​သော အကျိုးထူးများရရှိ ဖြေရှင်းနိုင်မည့် နည်းလမ်း လိုအပ်သူများအတွက် မျှဝေပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည် …. ။ မိမိအိမ်​ဘုရားတွင်​ မိမိ​မွေး​နေ့တွင်​ လှူပါ အနီးဆုံး အခက်​ခဲကိုကျော်​ကာ လိုရာပြည့်​နိင်​၏ …. ။ သင့်​​တော်​ရာ ဖန်​ခွက်​​ပေါ် ပန်းကန်​ ပန်းကန်​​ပေါ် ကိတ်​မုန့့် တင်​လှူပါ […]
ခွေး၎ကောင်ကိုလည်ချောင်းထဲက သွေးစပါလာအောင်ပင် အန်ကျွေးခဲ့တဲ့ ကျောက်တူးသမား ကိုစိုးနိုင်
ခွေး၎ကောင်ကိုလည်ချောင်းထဲက သွေးစပါလာအောင်ပင် အန်ကျွေးခဲ့တဲ့ ကျောက်တူးသမား ကိုစိုးနိုင် တစ်ခါက ဦးစိုးနိုင်သည် ခရီးသွားရင်း စိတ်မကောင်းစရာ မြင်ကွင်းတစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရသည်။ခွေးမကြီးတစ်ကောင်နှင့် ခွေးလေးသုံးကောင်တို့သည် အစာရေစာပြတ်ပြီး ချုံပုတ်ထဲတွင် ခွေလဲနေကြသည် …။ အိမ်မှာမမွေးချင်သဖြင့် ခွေးမကြီးနှင့်ခွေးကလေးသုံးကောင်ပါ တောထဲလာပစ်ထားရာ လူနေအိမ်များမရှိသဖြင့် အစာရေစာပြတ်ကာလဲကျနေကြခြင်းဖြစ်သည်။အစာတစ်နပ်လောက်သာ စားရပါက လူနေအိမ်များရှိသောနေရာသို့ သူ့သားအမိတစ်တွေ သွားနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ဦးစိုးနိုင်သည် […]
အိပ်ကပ်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်လျှင် ဆန်စေ့အနည်းငယ် ဆောင်ထားပါ
အိပ်ကပ်ထဲ ပိုက်ဆံပြတ်လျှင် ဆန်စေ့အနည်းငယ် ဆောင်ထားပါ ငွေကြေး၊ အလုပ်အကိုင် နှင့်ပတ်သက် သော စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နေသူများအတွက် ကုစားနိုင်သည့်နည်း ၃မျိုးရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံပြတ်နေလျှင် ဆန်စေ့အနည်း ငယ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ထဲဆာင်ထားပါ ။ သက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်အတွက်ဖြစ်စေ၊ ငွေကြေးတိုးပွားစေရန်အတွက်ဖြစ်စေ၊လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် …။ နည်းများမှာ ၊ဆန်ကိုအသုံးပြု ခြင်းပါဝင်ပြီး ဆန်သည်ဘဝတွင်ကြုံတွေ့ရသောပြဿနာများကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။ ဆန်ကို မင်္ဂလာရှိသည့် […]
တစ်ယောက်စီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် လေယာဉ် တစ်စင်းစီ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ရှေ့တိုင်းမှာ လေယာဉ်ပါကင်ထိုးထားလေ့ရှိတဲ့ ကမ္ဘာကျော်နေရာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ကိုယ်ပိုင်အိမ် ခြံ ကား နဲ့ နေနိုင်တဲ့သူတွေကို ချမ်းသာ တယ် လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် …။ ဒါပေမယ့် အမေရိကန် က နေရာတစ်ခုက တော့ အဲဒီထက်ပိုတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် […]
ဗိုက်အောင့် ၊ဗိုက်နာ၊ အစာအိမ်နာ ကို လက်တွေ့ ပျောက်တဲ့ဆေး
ဗိုက်အောင့် ၊ဗိုက်နာ၊ အစာအိမ်နာ ကို လက်တွေ့ ပျောက်တဲ့ဆေး လူတိုင်းနီးပါးခံစားဖူးတဲ့ ဗိုက်အောင့်ဗိုက်နာ အစာအိမ်ရောဂါကို စိန်ခေါ်သည်။ (လိုအပ်သူများ သုံးရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်) #အစာအိမ်နာ ပျောက်ဆေး အာလူး( ၁၅ )ကျပ်သားကို အခွံမခွါပဲ ရေစင်အောင်ဆေးပြီးနုတ်နုတ်စင်းပါ ပြီးရင် ရေနည်းနည်းနဲ့ ဆန်ပြုတ် ပြုတ်သလိုပြုတ်ပါ … […]
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်နဲ့ ဖတ်ကြည့်နော်…
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်နဲ့ ဖတ်ကြည့်နော်… ဘယ်သူတွေ ဘယ်လောက်ပဲ ကိုယ့်အပေါ် မုန်းမုန်း ပုံမှန်စိတ်ထားလေး ထားပြီး ဆက်ဆံပေးလိုက်ပါ။ အချိန်တန်ရင် သူ့လမ်းသူ သွားပါလိမ့်မယ်။ နောက်ကွယ်မှာ ကိုယ့်ရဲ့ အတင်းအဖျင်းတွေကို ဘယ်လောက်ပဲ ပြောကြပါစေ… လိုက်မရှင်းပါနဲ့။ အနေမှန်အောင် နေထိုင်လိုက်ပါ။ အဖြေမှန်ဆိုတာ…အချိန်တော့ပေးရပါတယ်နော်… ဒါပေမဲ့… ဘယ်သူမှန်တယ် မှားတယ်ဆိုတာ […]